थाहा खबर: शैलेन्द्र समदर्शी
अर्जेन्टिनी सपना धरापमा पर्छ त?
क्रोएसियासँग पनि अर्जेन्टिना अल्झिए मेस्सीहरूको विश्वकप यात्रा कस्तो रहला? अहिले धेरैको मनमा उठिरहेको जिज्ञासा हो यो। विश्वकपको छनोट यात्रा जस्तो विषम थियो, सायद त्यस्तै होला। समूहकै दुर्बल मानिएको आइसल्यान्डसँग बराबरी खेलेपछि अहिले अर्जेन्टिना सकसमा परेको छ। ठूलो दबाबमा...
बलियो उरुग्वेसँग आत्मविश्वासी इजिप्ट
दक्षिण अमेरिकी फुटबलमा उरुग्वे ब्राजिल र अर्जेन्टिनापछिकै सबैभन्दा सफल र बलियो टिम हो। यो त्यो टिम हो, जसले विश्वकप फुटबलको पहिलो उपाधि उचालेको थियो। अर्थात् सन् १९३० मा आफ्नै घरेलु मैदानमा छिमेकी राष्ट्र अर्जेन्टिनालाई पराजित गरी उरुग्वेले विश्वकप जितेको थियो...
स्पेन विश्व फुटबलको एउटा बलियो टिम हो। सामूहिक प्रयासले कसरी म्याच जितिन्छ, त्यो स्पेनबाहेक सायदै अरूलाई थाहा होला। स्पेन कहिले एक खेलाडीमाथि भरपर्दैन। ‘फुटबल ११ खेलाडीको हो र ११ खेलाडीकै सामूहिक प्रयासले म्याच जितिन्छ’, यो कुरा स्पेनलाई राम्रर...
‘नपत्याउने खोलाले बगाउँछ’ लोकोक्ति नै छ। इजिप्टका फुटबलर मोहम्मद सलाह पछिल्लो वर्ष इंलिस प्रिमियर लिगमा ‘नपत्याउने खोला’ नै थिए। तर उनले साँच्चै बगाए। आफ्नो अविस्मरणीय प्रदर्शनकै बाढीमा अरू टिमलाई बगाउने सलाहले ब्राजिली फेर्मिलो...
| जेठ २८, २०७५
विश्व कप फुटबलको जहाँ कुरा हुन्छ, त्यहाँ ब्राजिलको प्रसंग स्वतः उठिहाल्छ। तपाईं ब्राजिललाई छाडेर विश्व कपको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? अहँ, सक्नुहुन्न। यो दक्षिण अमेरिकी देश, जहाँ फुटबल धर्म हो, संस्कार हो र हो संस्कृति पनि। ब्राजिल विश्वको यस्तो एक मात्र देश हो,...
केही अहंकारी, केही छुच्चा तर गोलकै पछि लागिपर्ने रोनाल्डो भनेकै अहिलेको पोर्चुगेली टिम हो। रोनाल्डो अर्थात् पोर्चुगल। टिमका लागि प्रशिक्षक फर्नान्डो स्यान्टोसको ब्रह्मास्त्र। अन्य खेलाडीका लागि प्रेरणा। भनौँ टिमको अभिभावक। पछिल्ला केही वर्षयता रोनाल्डोले अचाक्ली राम्...